သို့ ဦးလွန်း၊ စွေစောင်းနေသော တတိယ မျက်လုံးအား ပြန်လည်တည့်မတ်ပေးခြင်း | Rakhaine Mray
သို့ ဦးလွန်း၊ စွေစောင်းနေသော တတိယ မျက်လုံးအား ပြန်လည်တည့်မတ်ပေးခြင်း
by James Mmt on Thursday, June 21, 2012 at 9:38pm ·
ရခိုင်ပြည်နယ် မြောက်ပိုင်းဒေသတွင် မိမိကိုယ်ကို မိမိ ရိုဟင်ဂျာဟု ခေါ်နေသော ရခိုင်လူမျိုးများ ရှိနေသည် ဆိုသည့်စကားမှာပင် ရိုဟင်ဂျာအား လော်ဘီလုပ်ချင်သည်ကို သိရှိနိုင်ပါတယ်….. အဆို ပါ ဘူးသီးတောင် မောင်းတောနယ် တစ်ဝိုက်မှာ နေထိုင်တဲ့ ဘင်္ဂါလီတွေဟာ ၎င်းတို့ကို ရိုဟင်ဂျာ အနေနဲ့ ခေါ်တွင်မှန်း သေခြာ မသိကြပါဘူး….. ဦးလွန်း ဘယ်အချိန်က တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ဘူး တယ် မသိပေမယ့် ကျွန်တော် ၂၀၀၇၊ ၂၀၀၈ ၀န်းကျင်တွေမှာ အကြိမ်ကြိမ် ရောက်ခဲ့ပေမယ့် သူတို့ကိုယ်သူတို့ ဘင်္ဂါလီလို့သာ သုံးနှုန်းပါတယ်…..
Drawn & Engraved by Charles Thomson Edin for “Constables, Miscellany” 23rd June 1827
အဲ့ဒိဟာနဲ့ ပါတ်သက်လို့ ရိုဟင်ဂျာ လော်ဘီသမား အများစုကို မေးနေကြ မေးခွန်းဖြစ်တဲ့ အင်္ဂ လိပ်တွေ မြန်မာပြည်ကို စာရွက်စာတန်းနဲ့ စနစ်တကျ အုပ်ချုပ်သွားတာမှာ ဘာကြောင့် ရိုဟင်ဂျာဆိုသည့် စကားလုံး ပါဝင်ခြင်းမရှိလဲဆိုတဲ့ မေးခွန်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်….. သူတို့ မဖြေနိုင်ကြ ပါဘူး…. ဘာ့ကြောင့်လဲ အဖြေကရှင်းပါတယ် အင်္ဂလိပ်လက်ထက်မှာ ရိုဟင်ဂျာဆိုတာ မရှိခဲ့လို့ပါ ပဲ….. တစ်ချိန်က ဘင်္ဂါလီတွေဘက်က ရှေ့နေလိုက်တဲ့လူတွေ ထုတ်ဖော်ပြောလာတဲ့ Encyclopaedia of the South-East Asian Ethnography စာအုပ်မှာပင် ရိုဟင်ဂျာ (Rohingya) လို့သုံးမထားပဲ (Rohinga) အနေနဲ့သာ သုံးနှုံးထားတာကို တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်…..
လက်ရှိ ရှိနေသော ဘင်္ဂါလီများကို အမှီပြုပြီး ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှမှ ဘင်္ဂါလီများ မကြာခဏ ခိုးဝင်နေ သည် ဆိုပီးတော့ ရောချလာတာကို တွေ့ရပါတယ်…. ဒီနေရာမှာ သမိုင်းကို လိမ်ဖို့ ကြိုးစားတဲ့ အတွက် အလိမ်တွေသာ ဆင့်ကာ ဆင့်ကာ ဖြစ်နေသလို ဘင်္ဂါလီ ရိုဟင်ဂျာတွေဟာ နဂိုကတည်း ကပင် တိုင်းပြည်အပေါ် သစ္စာမရှိဘူးဆိုတာ ပေါ်လွင်လာစေပါတယ်… အထူးသဖြင့် အိမ်နီးခြင်းနိုင် ငံမှ ခိုးဝင်လာသူများကို အကာအကွယ် ပေးခဲ့တာကို တစ်နည်းအားဖြင့် ၀န်ခံလိုက်တာပဲ ဖြစ် ပါတယ်…. မြန်မာအစိုးရအနေဖြင့် စစ်ဆင်ရေးအမျိုးမျိုးဖြင့် သန့်စင်ရှင်းလင်းခဲ့သည် ဆိုရာတွင် အကြောင်းကြောင်းကြောင့် ပြန်လည် လက်ခံရသည်ကို ထောက်ပြပီး နိုင်ငံသားအဖြစ် တနည်းတစ်ဖုံ အသိအမှတ်ပြုထားရသည်ဟု လိုရာဆွဲတွေး ရေးသားထားပါတယ်…. (မည်သည့် အတွက်ကြောင့် ပြန်လည် လက်ခံရသည်ကိုမူ ဦးနေ၀င်း အစိုးရမှ ယခုထက်တိုင် ရှိနေသော တစည ပါတီမှ တာဝန်ရှိသူများ တရားဝင်ဖြေရှင်းချက် ထုတ်ပေးမည်ဆိုလျင် ပိုမိုကောင်းမွန်မယ်လို့ ယူဆမိပါတယ်။)
ထပ်မံ၍ စာရေးသူမှ စစ်အစိုးရ တက်လာပြီးနောက်ပိုင်း ရိုဟင်ဂျာတွေ ဘ၀ဟာ သနားစဖွယ် ရေး သားလာပါတယ်…. စစ်အစိုးရ တက်လာပီးနောက်ပိုင်း သနားစဖွယ် ဘ၀များ ဖြစ်သွားကြ တာ မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံးပဲ ဖြစ်ပါတယ်…. ကုန်းကောက်စရာ မရှိအောင်မွဲ၊ တိုင်းပြည်ရှိသမျှ သယံ ဇာတ လက်ညှိုးထိုးရောင်းစား၊ ငါ့ဘို့တစ်ခုထဲသာ ကြည့်ခဲ့ကြသူတွေကြောင့် ပြည်သူအများစု ဒုက္ခပင်လယ် ဝေခဲ့ရတာကို ဦးလွန်းဟာ လျစ်လျူရှုပြီး ရိုဟင်ဂျာများကိုသာ သနားနေတာကို ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် ဦးလွန်း ဘယ်လဲ ဘာလဲ ခန့်မှန်းလို့ ရမှာဖြစ်ပါတယ်….
ဒီနေရာမှာ မြန်မာနိုင်ငံ၏ အချုပ်အခြာ အာဏာလျော့လျဲမှု၊ လာဘ်စားမှုများကြောင့် ဟာ ကွက်ဖြစ်နေတာကို အသုံးချလာတာကို ဗိုလ်မှူးလှမြိုင်ရေးတဲ့ ဘင်္ဂါလီများရဲ့ ဖားခုန်စနစ်နဲ့ ၀င်လာပီး အာမက်နေရာမှာ အာမက်၊ မူလာ နေရာမှာ မူလာနဲ့ ခပ်တည်တည် အစားထိုးဝင်လာခြင်း ဆိုတာတွေမှာ တွေ့နိုင်ပါတယ်… အဲ့ဒါတွေကြောင့်လည်း ရှိတဲ့အတွက် ကြိုတင် ကာကွယ်ထား ရခြင်းလည်း ဖြစ်ပါတယ်…. ရိုဟင်ဂျာများ၏ လူနေမှု ဘ၀မှာ ဆိုးရွားခက်ခဲတယ်လို့ ဆိုပါတယ်….. ဘူးသီးတောင် မောင်းတောမှာရှိသော ဘင်္ဂါလီ သူဌေးများအိမ်ကို ဦးလွန်း မေ့နေဟန် တူပါတယ်….
ဘင်္ဂါလီများဟာ အချိန်တန် အရွယ်ရောက်လျင် အာရေဗျီဘာသာစကား သင်ကြားပေးပြီး ၎င်းတို့၏ သားများအား အာရပ်နိုင်ငံများတွင် အလုပ်သွားလုပ်စေရန်သာ အားထားပျိုးထောင်လေ့ ရှိပါတယ် …. အဆိုပါ ဘင်္ဂါလီများ အပါအ၀င် ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှမှ အာရပ်နိုင်ငံများသို့ တရားမ၀င် သွားရောက် သူ များအား လူကုန်ကူးသည့် အစီရင်ခံစာများတွင်လည်း အထက်ပါ အချက်ကို တွေ့နိုင်ပါတယ်…. ဘူး သီးတောင် မောင်းတောရှိ ဘင်္ဂါလီများသည် ၎င်းတို့သားများအား အာရပ်နိုင်ငံများ သို့ စေလွှတ်ရာ တွင် ပထမ တစ်ဦးအား စေလွှတ်ပြီး ၎င်း၏ ညီနောင်သားခြင်းအား ခေါ်စေပါတယ်…. အဆိုပါ ဖား ခုန် စနစ်နဲ့ ဆင့်ကာ ဆင့်ကာ ခေါ်ခြင်းအားဖြင့် အိမ်ထောင်တစ်ခုမှ သားယောက်ျားလေး ၁၀ ယောက်ခန့် အာရပ်နိုင်ငံတွင် အလုပ်သွားလုပ်၍ တစ်လလျှင် သားယောက်ျားလေး တစ်ယောက် မှ ၁ သိန်းပို့ပေးရုံမျှနှင့် တစ်လ၀င်ငွေ ၁၀ သိန်းခန့်ရှိသည့် ကြေးရတက် တစ်ဦးဖြစ်လာပါတယ်…. သို့ဖြစ်သောကြောင့် ဘူးသီးတောင် မောင်းတော တ၀ိုက်ရှိ အိမ်ထောင်ဦးစီးများဟာ ကလေးများများ မွေးရန် အားထုတ်လေ့ ရှိကြပါတယ်….
အိမ်ထောင်ပြုခြင်းအား တားမြစ်သည်ဆိုရာတွင် မိန်းမအား အတားအဆီးမရှိ ယူခြင်း၊ ဘာသာရေး ဓလေ့ထုံးစံအရ အမျိုးသမီးမှ အစော်ကားခံရသည်ကို အပြစ်သင့်ခြင်း အစရှိသည့် အားသာချက် များကြောင့် ဘင်္ဂါလီတို့ အိမ်ထောင်တစ်စုလျင် ကလေး အယောက် ၂၀ နှင့်အထက် ရှိနေသဖြင့် တားမြစ်ရခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ယခုလက်ရှိ ဒီမိုကရေစီ ထွန်းကားသည့် အမေရိကန် နိုင်ငံတွင်ပင် တစ်ခါယူလျင် မိန်းမတစ်ယောက်သာ ယူရသည့် တစ်လင် တစ်မယား စနစ်ကို ကျင့်သုံးနေသည် ကို လေ့လာကြည့်လျှင် သိရှိနိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်….
တစ်အိမ်ထောင်လျှင် ကလေး အယောက် ၂၀ ခန့် ရှိကြသဖြင့် ကျောင်ထားရန် မဆိုထားနှင့် စား ရန် သောက်ရန်ပင် အနိုင်နိုင် ရုန်းကန်ကြရပါတယ်….. မှီခိုသည့် သားသမီး အရည်အတွက် များ လျင် အဆိုပါမိသားစု ဆင်းရဲတွင်းမှ မတက်နိုင်ခြင်းမှာ သူ့သဘာဝ ဖြစ်သော်လည်း ထုံးစံအတိုင်း အစိုးရကို အပြစ်ဖို့လာတာ တွေ့ရပါတယ်… အချို့သော ငွေကြေး ချောင်လည်သည့် ဘင်္ဂါလီ များမှ ဆင်းရဲတွင်း နက်နေသည့် ဘင်္ဂါလီများမှ လူငယ် ယောက်ျားလေးများအား အိမ်တွင် အခိုင်း အစေ သဖွယ် ခေါ်ထား၍ ကျောင်းထားပေးခြင်း ပြုလုပ်ကြပါတယ်…. ကျောင်းထားသည် ဆိုရာတွင် လည်း ရေးတတ် ဖတ်တတ်ရုံမျှသာ ထားပေးပြီး အချိန်တန်လျှင် အာရဗျီဘာသာကိုသာ ဆက်လက် သင်ကြားခိုင်းပါတယ်…. ထိုသို့ အိမ်တွင် ခိုင်းစေရန် ခေါ်ထားသည့် ကောင်လေးများမှ လူငယ်ပီပီ လိင်စိတ် မထိမ်းနိုင်ပဲ သောင်းကြမ်းသဖြင့် လူမှုရေး အရှုပ်အရှင်းများ ဖြစ်သဖြင့် အမှုဖွင့် တိုင်ကြား ၍ အရေးယူခံထားရသူများ နစက စခန်းမှာ မကြာခဏပါပဲ….. (နစက များရဲ့ ပွဲတော်ကြီးဆိုလည်း မမှားပါဘူး….)
ဘင်္ဂါလီ ရိုဟင်ဂျာများမှာ သန္ဓေတားလျင် ဘာသာရေးအရ အပြစ်ရှိသည်ဟု ခံယူထားသဖြင့် ရခိုင် လူမျိုးများထက် လူဦးရေ များပြားသည်ဟု မိုးကြိုးပစ်ရာ ထန်းလက် ကာထားသည် ကို လည်း တွေ့ရ ပါတယ်…. အထူးသဖြင့် အိမ်ထောင်တစ်ခုရှိ ယောက်ျား တစ်ယောက်တွင် အနည်း ဆုံး မိန်းမ ၄ ယောက်ခန့် ရှိပြီး မိန်းမ ၁ ယောက်လျင် အနည်းဆုံး ကလေး ၅ ယောက်နှင့် အထက် မွေးဖွားကြပါတယ်….. အဆိုပါဒေသရှိ ဖွားသေ ကိန်းဂဏန်းများကို UNDP/INDP အပါအ၀င် INGO တွေရဲ့ စာရင်းတွေမှာ ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်…. အချို့အိမ်ထောင်စုများတွင် မိန်းမ၏အမေ ယောက္ခမပါ သားမက်အိမ်မှာ လိုက်နေ၍ ဗိုက်ကြီးပြီး ကလေးပြန်မွေးသည့် အဖြစ်အပျက်များလည်း ရှိပါတယ်…. မကြာခဏ ကြုံတွေ့ရသည်မှာ သား၏ မိန်းမအား အဖေမှ မတရားပြုကျင့်သဖြင့် သားဖြစ်သူမှ မကျေနပ်၍ အဖေ၏ မယားထဲမှ တစ်ယောက် အား ပြန် လည် ပြုကျင့်ကြရင်း အခြင်းခြင်း အဝေမတည့် ဖြစ်၍ နစက ရုံးသို့ အပြန်အလှန် တရားစွဲရန် ရောက်လာတဲ့ အမှုတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်….
ရခိုင်ပြည်နယ် မြောက်ပိုင်းဒေသမှာ မြေလွတ်မြေရိုင်းများ အလွန့်ကို ပေါများတာကို အဆိုပါ ဒေ သကို ရောက်ဖူးသူတိုင်း သိရှိကြပါတယ်… မြေယာအသစ် ဖော်ထုတ်ခွင့် မရှိဟု ဆိုပါက ဘင်္ဂါလီ ရွာငယ်လေးမှ ရွာကြီးများ ဖြစ်လာသည်မှာ မည်သို့မည်ပုံ ဖြစ်သည်မသိဟု ဦးလွန်း ပြောချင်သလား မသိပါ…. ဘင်္ဂါလီများ မြန်မာပြည်သို့ ၀င်လာခြင်းမှာ ဘာသာရေး ဆရာများ ၏ သွေးထိုး မြှောက်ပင့် မှုနှင့် နယ်မြေအပိုင်လိုခြင်း၊ အစ္စလာမ်မစ် ကိုယ်ပိုင် အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ ဒေသအဖြစ် အကောင် အထည်ဖော် ရန် စသည့် ရည်မှန်းချက်တွေ ပါဝင်ပါတယ်…. အထူးသဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံမှ ဒုက္ခသည် ရိုဟင်ဂျာ ဆိုသည့်နာမည်ဖြင့် နိုင်ငံရပ်ခြားတွင် ဒုက္ခသည်အဖြစ် လျှောက်ထားရာတွင် ပိုမိုလွယ်ကူ သည့်အတွက် ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နိုင်ငံသားများပင် ၎င်းတို့ကိုယ် ၎င်းတို့ ရိုဟင်ဂျာဟုပင် လိမ်ညာကာ သွားရောက်သည့် ကိစ္စများ ပေါ်ပေါက်လာပါတယ်…. ထို့ကြောင့် မြန်မာပြည်မှ လာသည်ဟု သာ ပြောသော်လည်း မြန်မာစကား တစ်လုံးမျှ မတတ်သူ ပေါများလာတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်…. ရန်ကုန်မြို့ပေါ်ရှိ လူကုန်ထံ မြန်မာမွတ်စလင် အသိုင်းအ၀ိုင်းမှ အချို့သော လူများဟာ အင်္ဂလန်ကဲ့သို့သော အနောက်နိုင်ငံများတွင် နေထိုင်လိုသည့်အခါ ၎င်းတို့မှ ရိုဟင်ဂျာ ဖြစ်သည်ဟု လိမ်လည် ဖော်ပြ၍ ဒုက္ခသည်အဖြစ် လျှောက်ထားခြင်းဖြင့် ခိုလှုံရန် ကြိုးစားကြခြင်းများလည်း ရှိကြပါတယ်….
မှတ်ချက် ။ ။ ခင်ဗျားဘယ်သူလဲ ဘာလဲဆိုတာကို ပေါ်တင် ထုတ်ဖော် မရေးချင်ပါဘူး…. ခင် ဗျားခြေလှမ်း ဘာဆိုတာကိုလည်း မပြောချင်ပါဘူး…. ဒါပေမယ့် ခင်ဗျားလုပ်ရပ်က အစ ဆွဲထုတ်နေတယ် ဆိုရင်တော့ အစပေါင်းမြောက်များစွာ ကျွန်တော်တို့ လက်ထဲမှာ ရှိတယ်ဆိုတာ မမေ့စေချင်ဘူး….. မှန်သူနဲ့ မှားသူမှာ မှားသူကို မတားပဲ မှန်သူကို ငြိမ်ခံနေဆိုတဲ့ အပေါက်မျိုးကို လုံးဝ လက်မခံပါဘူး…….
← DETAIL NEWS အမျိုးသားရေးကာကွယ်သော လူမျိုးရေးဥပဒေအား (ရ.တ.ပ)က လွှတ်တော်သို့ တင်မည်
ဧရာဝတီ သတင်းဌာနအား ကန့်ကွက်ခြင်း →